UTom Howard - Hlela uhlelo lwakho lwesikhathi nommeli wethu we-cannabis
Kungani Inkampani Yakho YeCannabis Idinga Ummeli Omuhle
Insangu yibhizinisi elikhulayo ngokushesha eligcwele izithiyo ezilawulayo nokuncintisana komphimbo - ummeli ofanele wensangu angasiza ibhizinisi lakho le-cannabis
Kungani inkampani yakho yensangu noma i-hemp idinga ummeli we-cannabis?
Isethi yesibili yamehlo ekunikelweni kwakho okunikezela ngombono omuhle kakhulu kungenza inkampani iphumelele kakhudlwana. Isibonelo, uWarren Buffett wahlangana nommeli ogama lakhe UCharlie Munger ngonyaka we-1959 futhi wayewuthanda kakhulu umbono wakhe kangangokuba wamenza waqiniseka ukuthi awushiye umsebenzi wezomthetho futhi ajoyine naye eBerkshire Hathaway. Abameli beCannabis abangabamabhizinisi futhi abasebenza embonini futhi abanolwazi olujulile ngobungozi baso nezindlela zabo bangasiza ibhizinisi lakho ukuthola inzuzo yokuncintisana futhi inciphise ubungozi bokusebenza.
Sizofaka izinzuzo ezi-5 ezibalulekile ezinikezwa ngokuqasha ummeli webhizinisi lakho elisha le-cannabis. Izinkampani ziqasha abameli ukusiza ibhizinisi labo ngazo zonke izinhlobo zezinto. Nazi izinzuzo ezinhlanu ezingokoqobo ummeli wemboni yensangu angayiletha eqenjini lakho:
Ulwazi lwezinqubo eziNzima zeComplex kanye nezinqubo Zelayisense
Ukuqonda Ukuhambisana Nemithetho Yezimali kanye Nombuso
Ukuqonda Izinkontileka Zebhizinisi Zokusebenza
Isipiliyoni Semboni Esedlule Nolwazi
Ukuphatha Izingozi Zokuhlangana Zebhizinisi leCannabis
Sizodingida lezi zinzuzo ezinhlanu ngokuqasha ummeli ofanele we-cannabis webhizinisi lakho.
Bheka a insangu noma ummeli we-hemp mayelana nebhizinisi lakho le-cannabis.
I-Cannabis ikhula ngokuqinile ekusebenziseni nasekuthandweni emhlabeni wonke. Okwakuthathwa njengesiqubulo manje sekuthola udumo, ukuqashelwa kanye nokukhohliswa emazweni amaningi aseMelika neWashington, DC njengoba bekusemthethweni ukulima, ukutholakala kanye nokusetshenziswa kwensangu. Ngenkathi i-hemp isemthethweni ngokuphelele ngemuva kokususwa koMthetho Okulawulwa Wezinto ngu Umthethosivivinywa Wezolimo wase-2018.
Njengoba sikhuluma, amazwe angaphezu kuka-33 e-US abhalise ngokusemthethweni uhlobo oluthile lwensangu njengenye indlela yangempela yokwelapha esebenza ngempumelelo.
Yize umphakathi jikelele ushintshe indlela ababheka ngayo mayelana nensangu, ukuqala ibhizinisi le-cannabis futhi usebenza ngempumelelo, kungumsebenzi onqobayo uma kubhekwa umehluko emithethweni yombuso neyezimali.
Uma ungusomabhizinisi ozifisayo ngentshiseko yokungena kule makethe ekhulayo, kunconyelwa ukuthi uqashe ummeli we-cannabis onguchwepheshe. Inhloso enkulu yalokhu ukuqinisekisa ukuthi ibhizinisi lakho lihambisana nayo yonke imigomo esetshenziswayo kusimo sakho.
Namuhla, sizobheka ezinye zezinzuzo zokuqasha ummeli we-cannabis uma kuziwa ekuthengisweni kwe-cannabis, noma ngabe i-hemp, yezokwelapha noma insangu yokuzijabulisa.
1. Izidingo Eziyinkimbinkimbi Nezindleko Eziphakeme Zokufaka Imboni Yentsangu
Yonke imibuso inemithetho eyehlukene ehlanganisa ukusungulwa kanye nokwengamela kwebhizinisi lensangu. Izifundazwe eziningi zibeke imithetho elukhuni ngenani lamabhizinisi we-cannabis angasungulwa ngesikhathi esithile.
Umphumela uba ukuthi ezinye izifundazwe zinikeza kuphela amalayisense ngesikhathi sewindi lesicelo esincane kakhulu ngezindleko eziphakeme kakhulu nokuncintisana okukhulu kwamalayisense.
Kaningi kunalokho, abafakizicelo kudingeka bakhokhe imali ephezulu yokufaka ngenhloso yokuthola inzuzo ebalulekile ezizweni ezinelayisense.
Isibonelo esiphelele yi-Connecticut, ekhokhisa imali engama- $ 25,000 yesicelo esingabuyiselwa kubafundi abafuna ilayisense lebhizinisi labo lensangu. Unale izindleko eziphakeme engqondweni, ummeli we-cannabis uzokusiza uqonde ukuthi uhlangabezana kanjani nazo zonke izidingo zokulawula nezicelo ukukhipha izindleko ezedlulele zezimali.
2. Abameli Bensangu Baqonda Imithetho Kahulumeni Nombuso
Abanye osomabhizinisi abangochwepheshe be-cannabis banokuqonda okuyisisekelo kwemithetho yensangu embusweni wabo futhi balwela ukubalandela. Kodwa-ke, ngesizathu esisodwa noma ezimbili, uhulumeni wobumbano angaqhubeka acubungule ibhizinisi labo ngokungemthetho futhi akhishwe amalayisense abo.
Ummeli okhethekile we-cannabis kukusiza ukuba uqonde imithetho ye-federal neyezwe ukuze ukwazi ukuthola ithuba elingcono lokuthola impumelelo yesikhathi eside kulo mkhakha onenzuzo.
Ukuba nommeli we-cannabis onboard kufakazela ukusebenziseka kwakho ngokusemthethweni. Ukunquma imikhiqizo noma izinsizakalo ofisa ukukunikeza kubalulekile kuze kufike lapho kusungulwa ibhizinisi.
Amabhizinisi we-Marijuana ahlukaniswa izigaba ezintathu ezahlukahlukene, futhi iqembu ngalinye liqokomisa izindinganiso nemigomo ehlukile.
Ummeli onolwazi uzokusiza uqonde isigaba esithile ibhizinisi lakho lensangu liwela ngaphansi kwalo. Imikhakha yebhizinisi lensangu ehlanziwe imi ngalendlela elandelayo:
(i) Ukulima - Ukulinyelwa kwe-Marijuana kulawulwa kakhulu yizifundazwe ezahlukahlukene ukuqinisekisa umkhiqizo osezingeni eliphakeme, eliphephile futhi elisebenzayo. Izitshalo ezikhulayo zensangu zidinga ukutshala imali enkulu nokuzibophezela okuqinile. Ummeli wakho uzokusiza ukuthi uqalise kuleli bhizinisi ukuqinisekisa ukuphelela kwamasiko.
(ii) Ukumiliselwa - Osomabhizinisi abaningi basheshe basungule amabhizinisi abhekene nokuthengiswa kwama-tincture nama-cannabis a-infibles. Le bandwagon engakholeki igqugquzelwa izifundo ezandayo zesayensi ezithi izinzuzo ezibalulekile zensangu ekwelashweni okwelapha. Inani elikhulu lemithetho libhalwe ezifundazweni ezahlukahlukene ukuphatha izithako, ukulebhelisha nemiyalo efanelekile yokuhlinzeka yale mikhiqizo.
(iii) Ukuthengisa okuningiliziwe - Amabhizinisi eMarijuana ahlukaniswa ngaphansi kwesigaba sezitolo ezidayisa izimpahla kubandakanya izikhungo zokungcebeleka nezokwelapha. Imvamisa, lokhu kuhlangana kuthengisa imikhiqizo yabo kubantu abagunyaziwe neziguli ezineminyaka engaphezu kwama-21. Izindleko zokuqalisa zokumisa izitolo ezithengisa izinto ezibiza kakhulu kunazo zonke, kepha zivame ukukhiqiza inzuzo ebaluleke kakhulu kunazo zonke ezinye izinhlobo zamabhizinisi insangu.
3. Abameli BaseCannabis Baqonda Ukuhambisana
Ummeli oxoxa ngokweqiniso nayo yonke imithetho kahulumeni kanye nensangu uzokusiza ekuboneni imibandela ethile esetshenziswa esigabeni esithile ibhizinisi lakho lensangu. Ukuqonda izidingo zezicelo, ukunikeza amalayisense nokuxhasa ibhizinisi lakho le-cannabis kuyingxenye ebalulekile yokwakha nokunakekela inkampani esemthethweni yensangu.
Abanye osomabhizinisi abathile bensangu noma i-hemp bazama ukuzula lezi zinto zobuchwepheshe futhi bagcina belahlekelwe ukutshala imali yabo.
Inqubo ethintekayo ukufaka isicelo selayisense lebhizinisi nokufuna imali ingahluka kakhulu ngokuya ngendawo ohlala kuyo. Imali yokufaka izicelo ayibuyiswa kwezinye izindawo futhi imvamisa ibiza izinkulungwane zamaRandi ngaphandle kwesiqinisekiso sokwamukelwa. Ukwenza isheke ingemuva kungadingekile kwezinye izimo ukhula kubantu abatholwe benecala nomlando wabo ohambisana nodlame noma amacala ahlobene nezidakamizwa.
Ngaphezu kwalokho, izifundazwe eziningi zinemithetho ekhawulela inani lamabhizinisi insangu angabekwa endaweni ethile. Lokhu kudale ukuthi kube nezimali ezikhokhwayo nokwenyuka komncintiswano. Ezinye izifundazwe zibuye zize sinyathelo ukubuza ngezinsizakusebenza zakho zezezimali ukuze uqinisekise ukuthi unayo yini imisipha yezezimali yokuhlanganisa izindleko ezifana nokuqasha kanye nezinsiza.
Isibonelo, e-Illinois, umbuso ungadinga ukuthi amabhizinisi insangu ehlongozwayo abe nezinsizakusebenza zezezimali ezingekho ngaphansi kwesigamu sesigidi samadola ukuze aqale ibhizinisi. Umbuso ungaphinde ufune ukubona izindlela eziningi zokuphepha eziqashwe ngumnikazi webhizinisi ukuthi aqinisekise ukuthi insangu ekhiqizelwa ukwelapha ayipheli emakethe yabamnyama - kungaba ngengozi noma ngamabomu.
Ngaphandle kokulawulwa kombuso, ohulumeni basekhaya kanye namadolobha angaba nezindlela zawo zokulawula ibhizinisi le-insangu. Abanye ohulumeni basekhaya benza amasheke angemuva abanikazi bebhizinisi insangu kanye nabasebenzi babo njengemfuneko yokwenza isicelo selayisense.
Uma ucabanga ngalezi zindleko eziphakeme, ukuqasha ummeli we-cannabis ukukusiza ukuzulazula le mininingwane ebonakala yobuchwepheshe kungaba umqondo omuhle kakhulu ngaphambi kokuqhubekela phambili. Ukwehluleka ukulandela izidingo kungaholela enhlawulweni, kuchithwe ilayisense kanye nesikweletu sobugebengu phakathi kwezinye izinhlawulo.
4. Ukuthola Ibhizinisi Lakho le-Cannabis Off Ground
Ukuqala nokugcina ibhizinisi le-cannabis kungaba ngumsebenzi onzima. Ngaphandle kwezithiyo ezijwayelekile njengokugeleza kwemali, ukumaketha, ubudlelwano bamakhasimende, nokukhula, ibhizinisi le-cannabis kumele lihambisane ngokuphelele nayo yonke imithetho nemigomo - noma lungele ukubhekana nemiphumela. Ngommeli we-cannabis ofanele ohlangothini lwakho, ibhizinisi lakho lingakhiwa esisekelweni esifanelekile sokuqinisekisa ukukhula nokukhula kwesikhathi esizayo.
Ummeli omuhle we-cannabis uzokusiza ekwakhiweni kwebhizinisi le-cannabis nokusebenza, ukuklanywa nokuvunyelwa, nokuhambisana nokuthola ilayisense yendawo kanye neyombuso.
Ngaphandle kommeli, kulula ukuzithola uhamba umugqa omncane ngaphandle kokuqaphela ngenxa yemithetho ehlale ishintsha yemithetho elawula ibhizinisi le-insangu. Amacala amaningi obugebengu angakushaya ebhizinisini lensangu kufaka phakathi nesikhathi esingahle sibe sejele, izinsongo zokuvalwa kwebhizinisi, kanye nenhlawulo enkulu nezinye izinkokhelo.
Ummeli ofanele we-cannabis ngeke akuvikele kuphela kulawa macala kodwa futhi uvikele nedumela lebhizinisi lakho. Wonke amabhizinisi adinga ukusebenza ngaphakathi kwemikhawulo yomthetho ukuze umsebenzi uqhubeke usebenza. Ekugcineni, ibhizinisi lakho lifanelwe ukusebenza ngempumelelo ngaphandle kwengcindezi eyengeziwe yokubhekana nezinkinga zomthetho.
5. Ukulinganisa i-Marijuana noma i-Hemp Business Risk
Ukuqasha ummeli we-cannabis kuyindlela enhle yokunciphisa ubungozi ibhizinisi lakho elingabhekana nalo. Ngakolunye uhlangothi, insangu ihlala iyinto engekho emthethweni ngaphansi komthetho wenhlangano, futhi akukho okuhlukile okwenzelwe izifundazwe ezivumele ukusetshenziswa kwayo ngokusemthethweni ngezinjongo zokwelapha noma zokuzijabulisa. Ngakolunye uhlangothi, abantu abamabhizinisi abo ahambisana nemithetho yezwe ngokuvamile abanobungozi bokuboshwa noma ukuqulwa yiziphathimandla zombuso.
Ngenxa yalokhu, bonke abaninimabhizinisi abasensangu bayalulekwa ukuthi balandele ngokuqinile imithetho yezwe labo ngenhloso yokunciphisa amathuba okushushiswa kobugebengu kanye nokulahleka kokutshalwa kwemali. Uhulumeni womfelandawonye uhlala ebhekele amabhizinisi angavikelekile ngaphansi kwemithetho yensangu yombuso ukuze ashushiswe.
Ugxile ekushushiseni labo abathinteka emacaleni anjengokusatshalaliswa kwensangu ngamanethiwekhi obugebengu obuhleliwe, ukushayela ngezidakamizwa, ukusatshalaliswa kwensangu kuya ezinganeni nakweminye imisebenzi ehlanganisa ukutholakala nomuthi ngokungemthetho.
Ngommeli we-cannabis osesikhundleni, ungaqiniseka ukuthi ibhizinisi lakho lakhiwe ngendlela enganciphisa kakhulu ingozi yokushushiswa kwenhlangano.
Ummeli uzokwazi ukuhlela ibhizinisi lakho lihambisane nayo yonke imithetho yombuso ukugwema ukucishwa kwelayisense lebhizinisi nezinhlawulo ezihambisana nalo. Futhi, ummeli we-cannabis uzokwazi ukugcina ibhizinisi lakho livikelekile futhi lisesikhathini ngokubhekisisa imithetho yamacala nezinguquko kwinqubomgomo.
Ebhizinisini lensangu, iphutha elilodwa kungenzeka likufake enkantolo yezimali futhi liqede imali yakho. Elinye lamaphutha anjalo lifaka ukuqashwa kwabasebenzi. Uma uhlose ukuqasha abasebenzi abasha, ummeli we-cannabis uzokusiza ngemithetho yesikweletu nomshuwalense.
Imicabango yokuGcina kumaCanabis Attorneys
Amabhizinisi abathintekayo kulimo noma ukuthengiswa kwensangu abeka engcupheni enkulu yobungozi. Ngaleso sizathu, kungokusizakala kwakho ukucabanga ngokuqasha ummeli we-cannabis webhizinisi lakho.
Ummeli we-cannabis akagcini ngokusiza ekupheliseni ubungozi bezimali obukhona ebhizinisini lensangu, kodwa futhi uqinisekisa ukuthi amaphepha webhizinisi kanye nezicelo zamalayisense zihlelekile.
Ngokunikwa izindleko eziphezulu zokuqalisa, ubunzima bemithetho ethintekayo kanye nengozi yokushushiswa kwenhlangano, ummeli uzwakala njengezindleko ezinengqondo. Ukuzama ukutolika ngokwakho imithetho ye-cannabis ngokwakho kungachitha isikhathi futhi kudide.
Xhumana nommeli we-cannabis ukuze uxoxe ngezinketho zakho futhi uvikele isikhathi eside sebhizinisi lakho. Abethu bangabaninimabhizinisi njengawe.
by u-tom | Feb 12, 2021 | I-Nanotechnology ku-cannabis, Ukukhangisa
by u-tom | Feb 5, 2021 | imithetho ye-cannabis, I-Nanotechnology ku-cannabis, Ukukhangisa
by UDavid Leavitt | Feb 24, 2021 | Ummeli we-Boston Cannabis, Ukukhangisa